Izindaba - Ungasikhetha Kanjani Isihlungi Esifanele Sethangi Lenhlanzi
Ungayikhetha Kanjani Isihlungi Esifanele Sethangi Lenhlanzi
Uma kuqhathaniswa nendawo yemvelo, ukuminyana kwezinhlanzi ezise-aquarium kukhulu impela, kanti nenhlanzeko yezinhlanzi nezinsalela zokudla ziningi. Lezi zihlephula futhi zikhiphe i-ammonia, eyingozi ikakhulukazi ezinhlanzini. Lapho imfucuza iba miningi, kukhiqizwa i-ammonia eningi, futhi ikhwalithi yamanzi iba ngejubane elikhulu. Isihlungi singahlanza ukungcoliswa kwamanzi okubangelwa indle noma isicupho esisele, futhi sikhulise ngempumelelo umoya-mpilo oncibilikisiwe emanzini. Ingenye yamadivayisi angenakutholakali enqubeni yokudla.
Isihlungi esingenhla sisho uhlelo lokuhlunga ngaphezulu kwethangi lenhlanzi, nakho okuyiqiniso.
Umthetho osebenzayo wokuhlunga okuphezulu ngukuthi ipompo lamanzi lizofakwa ethangini lokuhlunga, bese liphindela emuva ethangini lezinhlanzi ngezinhlobo ezahlukahlukene zezinto zokuhlunga nokotini wokuhlunga. Ngemuva kwalokho ibuyela emuva ethangini lezinhlanzi lisuka kwipayipi lokukhipha ngezansi.
1. Intengo eshibhile
2. Kalula yesondlo nsuku zonke
3. Umphumela wokuhlunga ngokomzimba ulunge kakhulu
4. Asikho isidingo sendawo ehlukile
Ukuntuleka kwesihlungi esingenhla
1. Ukuxhumana nomoya ngaphezulu, kulula ukulahlekelwa yi-carbon dioxide
2. Ihlala engxenyeni engenhla ye-aquarium, futhi umphumela wayo wobuhle awubi.
3. Ingxenye engenhla ye-aquarium ihlala, futhi isikhala sokufakwa kwamalambu sinqunyelwe.
4. Umsindo omkhulu
Isihlungi esingenhla sinconyiwe maqondana nokulandelayo
1. I-Aquarium ngokuyinhloko yakhiwa yizinhlanzi nezimfanzi
2. I-Aquarium enezinhlanzi ezinkulu njengomzimba omkhulu
Ukusetshenziswa kwesihlungi esingenhla akunconyelwe lezi zimo ezilandelayo
1. I-VAT yotshani
2. Abasebenzisi abawukhathalelayo umsindo
Isihlungi sangaphandle simisa iyunithi yokuhlunga ohlangothini noma ngaphezulu. Amanzi afakwa ngaphakathi kwethangi lokuhlunga ngepompo elicwilizayo, ahlungwe ngezinto zokuhlunga, bese egelezela emanzini.
1. Intengo ephansi
2. Usayizi omncane, kulula ukusetha
3. Ayingeni esikhaleni esingenhla se-aquarium, futhi inendawo enkulu yokufaka amalambu.
4. Kulula ukuncela umoya-mpilo
1. Umphumela wokuhlunga ongemuhle
2. Ukuxhumana nomoya kakhulu, kulula ukulahlekelwa yi-carbon dioxide
3. Ngamazinga ahlukene wamanzi, kuvame ukuba nomsindo we-drip
4. Izinto zokuhlunga zidinga ukuguqulwa ngezikhathi ezithile.
Izihlungi zangaphandle zisetshenziselwa ukuhlaziywa okulandelayo
1. Isetshenziswa njenge-aquarium ukukhulisa izitshalo ezincane zasemanzini nezinhlanzi ezishisayo ngaphansi kuka-30cm
2. Abasebenzisi abafuna ukulawula izindleko
Izihlungi zangaphandle azinconyelwe lezi zimo ezilandelayo
I-Aquarium enkulu naphakathi
Okuvelele kwezihlungi ezakhelwe ngaphakathi
2. Ukusetha okulula
3. Ukwenela okwanele komoya-mpilo
4. Ifakiwe ku-aquarium futhi ayihlali esikhaleni sangaphandle
Okubi kwesihlungi esakhelwe ngaphakathi
1. Ilungele kuphela i-aquarium encane
2. Umphumela wokuhlunga ongemuhle
3. Kukhona umsindo we-aeration
4. Izinto zokuhlunga zidinga ukuguqulwa njalo.
5. Kubuye kuthinte nobuhle be-aquarium
Isihlungi esakhelwe ngaphakathi sinconyelwa lezi zimo ezilandelayo
Izihlungi ezakhelwe ngaphakathi azinconywa ukuthi nini
2. I-VAT yotshani
Isihlungi sesiponji (umoya wamanzi)
Isihlungi se-Sponge luhlobo lwedivayisi yokuhlunga edinga ukuxhuma iphampu ye-oxygen ne-hose yomoya, engakhangiswa odongeni lwe-aquarium. Ngokuvamile ilungele amasilinda amancane futhi ingasetshenziswa njengezihlungi ezisizayo zamasilinda asezingeni eliphakathi.
Umgomo ukusebenzisa umphumela wokukhishwa kwamanzi lapho i-bubble esemanzini inyuka, engakwazi ukumunca indle ngempumelelo nokudla okusalelayo. Ngaphezu kwalokho, amabhaktheriya asekotini lokuhlunga angakwazi ukubola ngempumelelo izinto eziphilayo, ngaleyo ndlela afeze injongo yokuhluza endaweni encane.